नवीन रायमाझी का लेखहरु
नवीन रायमाझी, मंसिर १४, २०७४
हामी बिदेशमा बस्नेहरुले बिनाकारण स्वदेशमा बस्नेहरुको व्यङ्ग्यबाण किन सुन्नु पर्ने हो मैले बुझ्न सकेको छैन । केहि इष्टमित्रहरुले समय–समयमा भनेको र मैले खासै बुझ्न नसकेको कुराको प्रसंग यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु । यदि मलाई जस्तै अरुले पनि यस्तो प्रश्न झेल्नु परेको भए, म मात्रै होइन रहेछु भन्ने र कसैलाई नपरेको भए यो संसारमा एउटा म मात्र अज्ञानी रहेछु भनेर चित्त बुझाउनु पर्ला ।
के बिदेश बस्नु अपराध हो ?
नवीन रायमाझी, कार्तिक १५, २०७४
हामी बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशको माया नभएको, अर्काको देशमा भाँडा माझ्ने, मुग्लान भासिएको, दोश्रो दर्जाको नागरिक जस्ता र अरुपनि अनेकौ तुच्छ शब्दहरुले विभूषित हुन पाउने गरेका छौं । तर, हामीले ठुलै अपराध गरेर यस्तो शब्द बाण खप्नु परेको भने होइन, आफु आउन नपाएको पीडा बोलेको हो । तर, यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । झुठो कुरा बोलेर आत्मद्रोह गर्ने हो भने कसैको केहि लाग्दैन ।
यमपञ्चकको सुरुवातसंगै अनेक किसिमका शुभकामना शन्देसका साथै दोश्रो ठुलो चाड तिहार शुरु भएको थाहा हुन्छ। मलाई यो चाड निकै मन पर्छ । खानामा मासुजन्य पदार्थ नहुने, चारैतिर झिलिमिली बत्ति बलेको र आफ्नो प्रियजनसँग मात्र भेट गरे हुने साथै छोटो अबधिको हुने भएकोले पनि मलाई यो पर्व प्रिय लाग्छ । दिप प्रज्वलित गर्ने कारणले दिपावली भनेको हुनुपर्नेमा आजभोली तिहारलाई दिपावली भनेर भारतीय करण भयो भन्ने जस्ता निरर्थक तर्क दिने महाबुज्रुकहरुको मानसिक अवस्थादेखि भने दया लाग्छ।
नवीन रायमाझी, आश्विन २६, २०७४
अमेरिकामा बस्नेहरुको नेपालका साथी वा आफन्तहरुले विभिन्न किसिमका सहयोग मागेर हैरान गरे भन्ने र नेपालमा बस्नेहरुले अमेरिका गएपछि फलानो घमण्डी भयो वा हामीलाई बिर्सियो भन्ने आम गुनासो रहेको पाइन्छ । पंतिकार स्वभावले मिलनसार नभएको कारणले त्यसरी गुनासो गर्ने न त साथी छन् न त नातेदार नै । त्यसैकारण मलाई व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो स्नेह युक्त गुनासोको अनुभव छैन ।
नवीन रायमाझी, आश्विन १८, २०७४
केही समय पहिले मित्र राजेन्द्र पराजुलीले यसै स्तम्भमा एउटा ब्लग लेखेका थिए, "हामी कति स्वार्थी !" शिर्षकमा । उक्त ब्लगमा पराजुलीजीले हामी उस्तै बिषय र घटनालाई आफुलाई पर्दा एउटा रुपले र आफुलाई नपर्दा अर्को रुपले व्याख्या गर्ने तरिकालाई बढो सुन्दर तरिकाले बर्णन गरेका थिए । उनको उक्त आलेखको कुराप्रति सतप्रतिसत सहमत हुँदै हामी स्वार्थी मात्र होइन, परपीडक, लोभी र कायर पनि हौ भन्न चाहन्छु ।
नवीन रायमाझी, आश्विन १०, २०७४
सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका शुभकामनाका शब्दहरुले दशैं आएको थाहा पाइयो । तर मलाई यो चाड खासै मन पर्दैन । केटाकेटी हुँदा लामो स्कुल बिदा, नयाँ नयाँ लुगा लगाउने र दक्षिणाको रुपमा सुका-मोहर पाइने कारणले मन परेपनि ठुलो भएपछि खासै रस बसेन । मलाई टिका लगाएर दिएको आशिर्बाद लाग्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास छैन ।